အရာရာဟာ ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာပါ – Myanmar Update News
news uptodate | November 24, 2020 | Knowledge | No Comments
ဟိုး ရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ အမတ်ကြီးတစ် ပါးဟာ အင်မတန်မှ အကောင်းမြင်တတ်သတဲ့။ ဘုရင်ကြီးက တစ် ခုခုတိုင်ပင်လိုက်တိုင်း အကောင်းမြင်တဲ့ ဘက်ကနေပဲ ဆွေးနွေးပါသတဲ့။ အကောင်းမြင်အပြုသဘော ဆွေးနွေးတော့ တော်ရုံ အပြစ်တွေတောင်အပြုသဘောဆောင်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ပြဿနာတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင် ခဲ့တာ ချည်းပဲတဲ့။
တစ်နေ့မှာတော့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ လက်မမှာ ပြည်တည်နာကြီး ပေါက်လာသတဲ့။ အတိုင်ပင်ခံကြီးကို ခေါ်တိုင်ပင်တော့ အရှင်ဘုရားစိတ်မပူပါနဲ့ ဆေးလိမ်း ဆေးသောက်ရင် ပျောက်သွား မှာပါ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါ ဘုရားလို့ လျှောက်တင်သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ လက်ဟာ မသက် သာပဲ ဖြတ်လိုက်ရ ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အင်္ဂါမစုံတဲ့ဘုရင်ကြီး ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။အဲဒီတော့ ဘုရင်ကြီးလည်း စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီး အတိုင်ပင်ခံကြီးနဲ့ စိတ်ပြေ လက်ပျောက် စကားပြောဖို့ ခေါ်လိုက် တော့ တာပေါ့ ။ ဒီတော့ အတိုင်ပင်ခံကြီးက ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာပါ ဘုရားလို့ ထပ်ပြီး ဖြေသိမ့်ပြန်တော့ ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးပြီး အတိုင်ပင်ခံကြီးကို
“ဒီလောက်တောင် ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာရင် ဆရာကြီး ခ ဏလောက်အကျဉ်းတိုက်ထဲသွားနေချည်လို့” ဆိုပြီး အကျဉ်းချ ထားလိုက်ပါတယ်။
တစ်ရက် မှာတော့ ဘုရင်ကြီးဟာ စိတ် အပန်း ပြေ စေ ဖို့ အတွက် တောကစား ထွက်ခဲ့တယ်။ စိတ်နဲ့လူနဲ့ သိပ်မကပ်တဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ကိုယ်ရံတော် တွေနဲ့ ကွဲသွားပြီး ယစ် ပူဇော်တဲ့ ဓလေ့ရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး သူတို့က ဘုရင်ကြီးကို ယစ်ပူဇော်ဖို့လုပ်ကြသတဲ့။ ဘုရင်ကြီးလည်း ပြည်တည်နာ ပေါက် ကတည်းက ဂြိုလ်ဆိုးဝင်ခဲ့တာ ခုဆို သေရမယ့် အဆင့်ထိတောင် ရောက်လာပါလားလို့ တွေးရင်း စိတ်ဆင်းရဲ နေတာပေါ့။
ယစ်ပူဇော်ဖို့ ဘုရင်ကြီးကိုရေချိုးပေး အမွှေးနံသာ လိမ်းပေးချိန်မှာ ဘုရင်ကြီးရဲ့ လက်မ ပြတ် နေတာကို တွေ့သွားကြ သတဲ့ ။ ဒီတော့ အင်္ဂါ မစုံတဲ့ သူနဲ့ ယစ် ပူဇော်လို့ မရတာကြောင့် ဘုရင်ကြီးကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီတော့မှဘုရင်ကြီးဟာ ဝိုး. . . ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာ. . ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာ ဆိုပြီး. . . ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နန်း တော်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
နန်းတော်ကို ရောက်ရောက် ချင်းပဲ ဆရာကြီး ကို အကျဉ်းတိုက်က လွှတ်စေပြီး ခစားခိုင်း သတဲ့။
ဆရာကြီး ခင်ဗျားပြောတာ မှန်တယ်ဗျာ။ ကျနော့် အတွက်ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာဗျ ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား အတွက်တော့ အကျဉ်း ကျပြီး အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ အဲဒီ အတွက် တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး” ဆရာကြီးလို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဆရာကြီးက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ကျနော်မျိုး အတွက်လဲ ကောင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ ဘုရားတဲ့ ။ တကယ်လို့ ကျနော်မျိုးသာ အကျဉ်း မကျ ရင် မင်းကြီးနဲ့ တူတူလိုက်ရမှာမို့ အဖမ်းခံရတဲ့အခါ ဘုရင်နဲ့ကျနော် နှစ်ဦးဖမ်းခံရ မှာပါ ။ ဒီအချိန်မှာ အင်္ဂါစုံသူ ကျနော်ဟာ ကိုယ်စားယစ်ပူဇော်ခံရပြီး အသက်နဲ့ ကိုယ် အိုးစား ကွဲ မှာ ပါ ဘုရား အခုတော့အကျဉ်းတိုက်ထဲမှာ အနားရလို့ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဘုရားတဲ့။ ဘုရင်ကြီး ကလည်း ကောင်းပါ လေ့ ဆရာကြီး ရယ် လို့ ပြော ပြီး
တဟားဟားနဲ့ အားရပါးရ ရယ်လိုက်ပါ သတဲ့။
ကျနော်တို့ဘဝမှာလည်း တစ်ခါတရံ အခက်အခဲလေးတွေ အတိုက် အခိုက်လေးတွေ ကြုံတွေ့ လာရတဲ့ အခါ လူတော်တော်များများက စိတ်ပျက် ညီးညူတတ်ကြတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီအခက်အခဲတွေအတိုက်အခိုက်တွေဆိုတာ နောင်တစ်ချိန်အရာရာအတွက် ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါ။
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲကြုံကြုံ ဘယ် လို အတိုက် အခိုက်ပဲ ကြုံကြုံ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာလို့ စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါ။ ခုလည်းပဲ ဒီစာကိုဖတ်ဖြစ်သွားတာဟာ မိတ်ဆွေအတွက် ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာပါ ခင်ဗျ ။
ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်. . .
အရာရာ ဟာ ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတာပါ ။ မူ ရင်း ရေးသား သူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။